जनता भोकै २४ घण्टा लाइनमाबसे ग्यास ब्यापारी रातारात करोडौ कमाउन ग्यास अन्तै बेचे-ओली सरकार तेरो राष्ट्रिय स्वाधिनता कालोबजारी पोस्ने? ~ Khabardari.com
जनता भोकै २४ घण्टा लाइनमाबसे ग्यास ब्यापारी रातारात करोडौ कमाउन ग्यास अन्तै बेचे-ओली सरकार तेरो राष्ट्रिय स्वाधिनता कालोबजारी पोस्ने?
देशभरी कालोबजारी बढ्यो महंगीले आकास छोयो इन्धन आइरहेको छ तर सिधै कालोबजारी , धनि र पहुचवालाले पाएकाछन । देशभरी जनता ग्यासको लाइनमा बस्दा ग्यास आएपनि सरकारी मिलेमतोमा कमिसन र अत्यधिक मूल्य खादै ठुला ठुला होटल, धन, पहुच हुनेलाई बेचेर रातारात करोडौ बन्ने मनसायले सर्बसाधरणलाइ ग्यास उपलब्ध नगराइएको खुलासा भएको छ ।
आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने भनिएपनि २ दिनदेखि काठमाडौँमा जनता १२ देखि २४ घण्टा लाइनमा बसेर रित्तोहात फर्किए कारण कालोबजारी । तेल लगायत् सबै इन्धन प्रसस्त बजारमा पाइने तर मूल्य दोब्नर तिर्नुपर्ने यथार्थले सरकारका निकायकै मिलेमतोमा भुकम्प , बन्द , चाडबाडको मारले न ब्यबसाय , आम्दानी छ, खान लाउन नपाएर थला परेका जनतालाइ राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दै कालोबजारी गर्ने सरकार जनताको छाला काढ्न लागेकोछ ।
सबै जनता सचेत भएर कालोबजारी , घुसखोरीगर्ने कर्मचारी , डिपो र ब्यबसाइलाइ सडकमा ल्याएर खबरदारी गरौँ ।
सरकार आफ्ना कमजोरी जति सबै भारतीय हस्तछेप भन्न लागेकोछ । खोइ कहाँ छ प्रशासन उपभोक्ता अदालत ? अख्तियार अनि जनताको अधिकारको दुहाइदिने दलाली दलहरु ?
बजारमा इन्धन प्रसस्त तर कलोबजारीमा-गरिब भोकै-ओली सरकार तेरो रास्ट्रीय स्वाधिनता कालोबजारी पोस्ने हो ? सामाजिक संजालमा जनताको आक्रोस बढेको छ ।
नागरिक दैनिकले जनताको पक्च्यमा ल्याएको तलको खबर जस्ताकोतस्तै हेर्नुस
ग्यास उद्योगीले शुक्रबार राजधानीका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई शनिबार ग्यास बाँड्ने 'ललिपप' देखाए। दुई महिनादेखि ग्यास सकिएर यताउता भौंतारिइरहेका उपभोक्ता शनिबार बिहान तीन बजे नै नजिकका डिपो पुगेर सिलिन्डरसहित लाइन बसे।
ग्यास उद्योगीले होटललाई शनिबार राति ८ बजे ग्यास लिन बोलाएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ,' उनले भने, 'कतिपय होटललाई उद्योगी आफैंले आफ्नो गाडी प्रयोग गरेर ढुवानी गरेका छन् ।'
राज्यलाई संकट परेका बेला उद्योगीले रातारात मोटो रकम कमाउन खोजे जसका कारण जनताले १२ घन्टा लाइनमा बसेर रित्तै फर्कनुप¥यो,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'आज उद्योगीले देखाएको रवैयाले हामी दुःखी छौं । भोलिबाट प्रत्येक उद्योगमा छापा मार्छौं ।'